Margarekha पुरुषको शरीरको कुन भागमा महिलाहरू बढी आकर्षित हुन्छन् ? – Margarekha
पुरुषको शरीरको कुन भागमा महिलाहरू बढी आकर्षित हुन्छन् ?
यूनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बियाको एक अध्ययनको अनुसार, पुरुषको आँखाले महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको अध्ययनमा पनि यस कुरामा रिसर्च गरिएको छ कि शरीरको कुन भागमा सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । कित्सकका अनुसार, पहिलो प्रभाव नै अन्तिम प्रभाव हुन्छ । यदि पुरुषको शारीरिक स्वरूप राम्रो हुँदैन भने उसको व्यक्तित्वको अरू पक्ष प्रति पनि वेवास्ता हुनसक्छ ।
४ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ११:०५ प्रकाशित